Tag: terevhizheni | Martech Zone
Tag: tv mafuremu
Sei Netflix Inowedzera Kuteedzera Kwevatengi Kubata Ichishandisa Big Data
Chitatu, Kukadzi 28, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Ruzivo rwevatengi rwezvinyorerwo zvichave nemhedzisiro yakakura yekuti vanochengetwa sevatengi here kana kuti vanogona kukwidziridzwa. Kubata mashandisiro ekushandisa inzira yakakosha yekuita izvi. Kana iwe uri nzvimbo yekutengesa, bhizinesi, kana sevhisi - ongororo, kudzoka, kutumira, kufona, uye kushandisa frequency kunogona kupa dhata risingabvumike iro rinogona kufanotaura maitiro ekutenga. Izvi zvakakosha zvakanyanya kubhizinesi. Ipo yako mutengi maitiro